Xildhibaan Xuseen Iidow oo sheegay in laba aragti ay isku heyso Soomaaliya – Kalfadhi
Xildhibaan Xuseen Iidow oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay sida ay Soomaaliya doorasho uga dhici karto iyo Sharciga doorashooyinka ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa sheegay in uu qabo rajo aad u wayn oo ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadii ay xaaladda sidaan ku sii socoto. Magaalooyinka waa wayn ee dhulka Soomaaliya ayuu sheegay in ay doorashada ka dhici doonto sida uu qorshuhu yahay.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ay suurta gal tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho dad-badan hadii la huri waayo oo islamarkaana ay ku heshiiyaan madaxda Soomaaliya.
“Aniga waxaan qabaa kalsooni wayn oo ah in qof kasta wakiilkiisa soo doorto oo laga baxo mataaladda 50-ka qof iyo go’aanada odayaasha” ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Iidow.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in ay ka fekeraan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in dalka doorasho ka dhacdo waana in markaan ay eedaan codkooda” ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Iidow oo katirsan Golaha Shacabka.
Dhinaca kale Xildhibaan Xuseen Iidow ayaa sheegay in Soomaaliya ay isku haayaan laba aragti oo siyaasadeed. Mid kamid ah aragtiyadaasi ayuu sheegay in ay ka shaqayneyso hormarka dalka halka tan kale ay ka shaqayso dib u dhaca iyo soo kabasha la’aanta sida uu hadalka u dhigay.
“Soomaaliya waxaa isku haaya laba aragti, mid waxay ka shaqaysaa horumarka dalka, midna waa diidaa horumarka waxayna ka door bidaa khilaaf iyo xasilooni darro” ayuu yiri Xuseen Iidow oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
“Labada aragti mid kamid ah waxay ku dadaashaa dhameestirka dastuurka, doorashooyinka oo dhaca, ciidamada oo la dhiso, dalka oo soo kabasho sameeya dhan walba halka aragtida kale ay intaas diidan tahay” ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Iidow oo wareysi siiyay Kalfadhi.